नेयमार किन गएनन् त रियल मड्रिड ? यस्तो छ खुलासा !
कोशी अनलाइन शुक्रबार, ०४ साउन, २०७५ मा प्रकाशित
साउन ४, मोरङ, गएको केही सातादेखि ब्राजिल तथा पीएसजीका स्टार नेयमार स्पेनिश क्बल रियल मड्रिड जाने भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले धमाधम खबर दिइरहेका थिए । उनलाई रियल ट्रान्स्फर गर्न उनका बुवा नेयमार सन्टोस एसआरले पनि जोड गरेको भनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका थिए ।
यत्ति मात्र नभएर उनी रियल आउन चाहेको र रियलमा रहेमात्र उनको भविष्य सुध्रिने भन्दै लेजेण्ड खेलाडीहरुले पनि उनको बारेमा टिकाटिप्पणी दिएका थिए ।
तर, विश्वकपको क्वार्टरफाइनलबाट घर फर्किएको ब्राजिलका स्टार नेयमारलाई रियलले एक आधिकारिक वक्तव्य निकाल्दै क्लबले अनुबन्धको प्रयास गरेको हल्लाहरुलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
वास्तवमा उनी कि आएनन् त रियल ? यो सबैको सामू कौतुहलताको प्रश्न रहेको छ ।
वास्तवमा उनी उनका ब्राजिलियन टिममेट मार्सेलोका कारण रियल नआएको ब्राजिलियन पत्रकार आन्द्रे रिजेकले खुलासा व्यक्त गरेका छन् ।
रियल मड्रिडका पूर्वम्यानेजर जिनेदिन जिदानले क्लबबाट राजिनामा दिनुअघि ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमारलाई बर्नबेयु ल्याउने आइडियालाई स्वीकृत गरेका थिएनन् । उनलाई लाग्थ्यो नेयमार र अर्का ब्राजिलियन डिफेन्डर मार्सेलो एकसाथ खेल्न सक्दैनन् ।
ब्राजिलियन पत्रकार आन्द्रे रिजेकले ब्राजीलको एक स्पोर्ट टिभीसँग यो कुराको खुलासा गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई यो कुरा जिदानको साथीबाट थाहा भयो । क्लब छोड्नु अघि जिदान र उनका यी साथीले सँगै डिनर गरेका थिए । यहि भेटघाटका क्रममा जिदानले नेयमारको बर्नबेयु आउने सम्भावनाबारे आफ्नो विचार राखेका थिए ।’
उनले भने, ‘जिदानले आफ्नो साथीलाई भनेका थिए कि उनलाई नेयमार बर्नबेयु आउने कुरा मन परेको छैन । जिदानका अनुसार नेयमार र रियलका लेफ्ट ब्याक मार्सेलो एकसाथ खेल्न नसक्ने उनको बुझाई थियो । जिदानलाई लाग्थ्यो यी दुवै खेलाडीले मैदानको एकै भागमा खेल्थे र जिदानले नेयमारको अनुबन्धमाथि असहमति जनाएका थिए ।’
उनको यो निर्णयसँगै धेरै आश्चर्यमा परेका थिए । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरु उनको यो राजिनामा पछाडीको कारण खोज्न प्रयासरतसमेत थिए ।
कुनै कुराहरु बाहिरसमेत आएको थियो । त्यसमध्ये ला लिगामा क्लबको प्रदर्शन र कोपा डेल रेमा लेगानेससँगको हार पनि एक कारण मानिएको थियो । कसै–कसैले रियलको ट्रान्सफर प्लान जिदानको सहमति बिना नै बनाइएको बताइन्छ । जसमा नेयमारको स्थानान्तरण पनि सामेल थियो ।
आफ्ना स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई युभेन्ट्समा बेचेपछि रियलले नेयमारलाई आफ्नो मुख्य टार्गेट बनाएको छ ।
रियल मड्रिडलाई लगातार तेस्रोपटक च्याम्पियन्स लिग जिताएको पाँच दिनपछि जिदानले बर्नबेयु छोड्ने घोषणा गरेका थिए ।